Fasana Fasana ara-pitsaboana - Medical Aid International
Fahatezerana amin’ireo milina fitsaboana Nosoratan’i Dr Nahid Bhadelia
Nahita an’ity lahatsoratra mamirapiratra ity aho ary hitako fa nisy famakiana mahaliana. Ny lahatsoratra dia manasongadina olana maro tsy voatonona ao anatin’ny fitsaboana ao amin’ny LMICs .
Ny olan’ny fitaovana fanomezana tsy mifanaraka amin’ny antony noho ny antony maro samihafa toy ny tsy mifanaraka na tsy fahampian’ny famatsiana herinaratra ary ny fitaovana tapaka izay tsy azo alamina noho ny tsy fahampian’ny fanabeazana injeniera biomédical.
Namarana ny lahatsoratra i Dr Nahid Bhadelia izay naneho ny tsy fitahiany manoloana ny “fako very” fitaovana fitsaboana matetika noho ny tsy fisian’ny fifandraisana eo amin’ny mpamatsy vola sy ny mpandray.
Ireo ahiahy rehetra ireo no iasantsika mafy hamahana.
Ny fizotranay dia mifampiresaka mivantana amin’ny mpandray mba hahazoana antoka fa ara-potoana voalohany ny fitaovana ara-pahasalamana ary tena ilaina izany. Mirehareha amin’ny fanohanana mitohy izahay na dia efa vita aza ny tetikasa.
“Rehefa simba ny fitaovana fitsaboana any amin’ny tany an-dalam-pandrosoana dia tapaka foana izany” Ity dia zavatra apetraky ny tale jeneralintsika Tim Beacon hamaha azy. Izahay dia namolavola ny Mazava ho azy fa momba ny haitao biomedika amin’ny Internet noho io antony io indrindra.
Ny lalantsika azo idirana eran’izao tontolo izao ary tena hisy fiatraikany tsara amin’ny habetsaky ny fitaovana very maina.
Nosoratan’i Katie Sampson
Fanohanana ara-barotra sy ara-panabeazana